Dagaal Dhexmaray Shiinaha Iyo Hindiya Oo Gamcaha Laysula Tegey - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Dagaal Dhexmaray Shiinaha Iyo Hindiya Oo Gamcaha Laysula Tegey
Delhi(ANN)-Dagaal gamcaha laysula tegey oo dhexmaray dalalka Hindiya iyo shiinaha, ayaa sababay dhimashada in ka badan labaatan ka tirsan Ciidamada dalka Hindiya ee jooga xadka ay la wadaagaan dalka Shiinaha.
Markii ay bilaabantay xiisaddu, waxaa laysu adeegsaday dagaal laysu adeegsaday dhagxaan, Budhadh iyo feedh oo aan laysu adeegsan hub.
Xiisad dagaalka ayaa timi kadib muran ka dhashay waddo ay Hindiya ka samaynayeen xadka ay la wadaagaan dalka Shiinaha ee mara silsilada Buuralayda aduunka ugu dheer ee Himalaya, waxayna xiisaddan sii xoojisay muranka labada dal u dhexeeyay ee mudada dheer soo jiitamayay.
“Waxay u muuqataa in xaaladda ay sii xumaatay,”sidaa waxa sheegaya Vipin Narang oo ka fallooda arrimaha amniga, kaddib dagaalkii ba’naa ee Isniintii xadka ku dhexmaray ciidamada Hindiya iyo Shiinaha.
Dagaalkan ka dhashay muranka dhanka xadka ee ugu muddada dheeraa dunida kaas oo socday ku dhawaad nus qarni ayaa horseeday in la dilo 20 ka mid ah ciidamada Hindiya, Hindiya waxay sheegtay in labada dhinacba uu khasaare soo gaadhay.
“Mar haddii ay sii socoto dhibaatada, waxay horseeday in xaaladda ay ku cakirnaato labada dhinac, hadda waxaa sare u kacaya cadaadiska ka imaanaya shacabka”, waxaa sidaas yiri Dr Narang, oo ka faalooda arrimaha amniga ahna Profosser wax ka dhiga macadka Massachusetts ee dalka Mareykanka.
“Baaxadda iyo cadaadiska ballaaran ee ku saabsan muranka xadka labada dal waa mid aan hore loo arag,”ayuu yidhi.
Labadan dal, ayaa haysta hubka Nukliyerka, waxaana ka dhexeeya taarikh dheer oo ah khilaaf dhanka xadka ah, kaas oo in muddo ah soo jiitamayay. xilligana howlagallada ay ka sameeyaan ciidamada Shiinaha iyo Hindiya ayaa horseeday isku dhacyo joogto ah, balse la iskuma adeegsan wax rasaas ah muddo ka badan 40 sannadood.
Waana sababta ay soo ifbaxeen dagaalladan cusub kaddib dhawr bilood oo ay xiisaddu taagneyd, haatan waxaa uu noqday mid lama filaan ah.
“Waa xiisad lama filaan ah oo qeyrul caadi ah,” waxaas sidaas yidhi, Shashank Joshi, oo ah tafatiraha jariiradda The Economist.
Iskahorimaadka ayaa yimi, kadib markii bilihii la soo dhaafay ay xiisado ka dhasheen waddo cusub oo Hindiya laga dhisay oo ku taalla magaalada Ladakh, iyada oo la raacayo Khadka Tooska ah ee kala qaybiya labada dhinac ee xuduudda.
Hindiya waxay sheegtay in labada dhinac uu khaasaare ka soo gaaray dagaalka halka Shiinaha uu ku eedeeyay ciidammada Hindiya in labo jeer ay xadka si shaci darro ah uga soo tallaabeen, isla markaana ay saraakiisha Shiinaha ku soo qaadayaan weerarro daandaansi ah.
Ankit Panda, oo Tafaftire sare ka ah wargeyska The Diplomat ayaa sheegayaa in xiisadda u dhexeysay labada dal ay aheyd mid taagneyd tan iyo murankii xadka sannadkii 2017-kii, xilligaas Shiinaha uu waddo ka dhisayay halkaas kaas oo horseeday 73 maalmood ah oo khilaaf ah.
Balse tallaabada uu ku dhaqaaqay Shiinaha haatan “ayaa u muuqataa mid ka duwan tallaabooyinkii uu horey u qaaday,” waxaa sidaas yidhi, Shivshankar Menon oo ah khabiir Shiinees ah isla markaana horey u ahaa la taliye dhanka amniga ah.
“Xaaladdu ma waxay ka dhalatay dhistaanka waddada? Ama waxay ku saabsan tahay go’aankii Hindiya ee aqoonsigii gaarka ahaa ay kagala noqotay gobolka Kashmiir? Mise waa dandaansi? Ma garan karno,” ayuu yidhi Dr Ngarang.
“Waxaad arkaysaa tallaabooyinkiisa ku aadan badda Yellow Sea ee Taiwan, waxaa uu meel mariyay sharci isaga oo aan la tashan Hong Kong, muranka xadka ee ka dhexeeya Hinidiya iyo dagaalka ganacsi ee ka dhexeeya Australia”.
Tafaftiraha jariiradda The Economist waxaa uu rumeysan yahay in cawaaqib xumada ka dhalan karta dagaalka Isniintii dhexmaray ciidammada Shiinaha iyo kuwo Hindiya “ay horseedi doonto xiisad dblumaasiyadeed oo muddo dheer socon karta.”